Talyaaniga Afrikaanka ah ee doonaya in muhaajiriinta ay dalalkooda ku laabtaan |
Tony Iwobi, sida janaraalkii qarnigii 19-aad dhisay Talyaaniga casriga ah, waxaa loo aqoonsaday “inuu taariikh sameeyay”. Waa ninkii ugu horreeyay ee madow ah oo Senator ka noqda dalkaasi Talyaaniga.
Mr Iwobi ayaa qirtay inuu dareemay “sida cunug yar oo iskuul la geeyay maalintii ugu horreysay” markii uu la fadhiistay 320 kale oo senator ah. Wuxuu sheegay inuusan keliya xil ka saarneyn Talyaaniga, balse uu sidoo kale matalo qaaradda uu ku dhashay uuna ku soo barbaaray.
Dadka ka soo horjeeda ayaa sheegaya in Mr Iwobi, oo ah afhayeenka soo galootiga ee xisbiga, loo adeegsaday in lagu daboolo “aragtiyada isir-nacaybka ku saleysan” ee xisbiga. Waxay tusaale u soo qaateen dhacdadii sanadkii 2013-kii, markaas oo senator ka tirsan League uu wasiirkii ugu horreeyay ee Talyaaniga ee madow ah, Cecile Kyenge, ku tilmaamay “daanyeer”.
Mr Iwobi ayaa qirsan in saaxiibkiis “uu khaldamay” balse wuxuu beeniyay eedeymaha ah in xisbigiisa uu adeegsado: “Ha soo raadiyeen taariikhdeyda,” ayuu yiri. “Cidna ima adeegsato. Waxaan ku fekeraa maskaxdeyda.”
‘Waxaan la jiraa Salvini’
Xafiiskiisa waxaa suran funaanad ay ku qoran tahay “Waxaan la jiraa Salvini” – taasoo ah calaamad muujineysa taageerada uu u hayo hoggaamiyaha xisbigiisa, Matteo Salvini.
“Waxaan taageersanahay muhaajiriinta sharciga kusoo galay. Qof walba oo si sharci ah ku soo gala waa la soo dhoweynayaa. Waxaan la jirnaa qaxootiga, balse waan ka soo horjeednaa soo galootiga sharci darrada ah, kuwaasoo dhinta iyagoo isku dayaya inay Yurub tagaan,” ayuu yiri Iwobi.
Dr Pesarini oo muddo dheer dalkaasi ku nooleyd ayaa sheegtay in dad badan oo Talyaani caddaan ah ay la yaabaan marka ay arkaan iyadoo luqadda Talyaaniga si fiican ugu hadleysa. Dadku waxay i weydiiyaan: ”Xaggeed ka timid?’ waxaan dhahaa: ‘Waxaan ka soo jeedaa Rome’. Waxay i weydiiyaan: ‘Maya, xaggeed asal ahaan ka soo jeeddaa?’ Waxaan kaddib xaqiiqsadaa sida isirka, caddaannimada iyo gumeysigu ay weli maanta saameyn ugu leeyihiin dhalashada talyaaniga”.
Dadka xuquuqda u ol’oleeya ayaa ka doonaya dowladda in dadka ku dhashay kuna barbaaray Talyaaniga ay u fududeyso dhalashada dalkaas. Balse waxaa arrintaas aad uga soo horjeeda xisbiga Paolo Diop ee Brothers of Italy iyo kan Senator Iwobi, ee League.
Tommy Kuti oo fannaan ah ayaa ka soo horjeeda aragtida Iwobi: “Waxaan u maleynayaa in haddii uu doonayo in muhaajiriintu ay joogaan Afrika, uu isaga tusaale wanaagsan u noqdo uuna ku laabto Afrika, ayuu yidhi”.